SONY News: Nkọwapụta, ekwentị, mbadamba, mgbọrọgwụ na ndị ọzọ - Androidsis | Gam akporosis
Sony bụ ụlọ ọrụ ndị Japan, hiwere na 1946 ma dị ugbu a na mpaghara telephony kemgbe 2001. Ekwentị mbụ ya malitere n'okpuru akara Sony Ericsson, mana ebe ọ bụ na 2012 ka emepụtara ha dịka Sony Xperia, akara nke ha na-aga n'ihu taa. Ekwentị ha niile na-eji gam akporo dị ka sistemụ arụmọrụ. Na mgbakwunye na smartphones, ụlọ ọrụ ahụ na-ebupụta mbadamba na ihe eji ejiji dịka elekere anya na ahịa. Ha nwekwara nnukwu nhọrọ nke kamera, tiivi, ma ọ bụ ndị na-egwu egwu.
A maara ekwentị Sony maka ogo ha dị elu, ịbụ otu n'ime ụdị ndị kachasị mkpa na mpaghara foto. Ha na - eme ihe mmetụta maka ọtụtụ ụdị na gam akporo taa. Otu ụlọ ọrụ mara maka ihe ọhụrụ ya. N'ime otu a, ị ga-ahụ akụkọ, ozi ma ọ bụ nyocha niile nke ekwentị Sony ma ọ bụ ngwaọrụ.
Na February nke afọ gara aga, Sony malitere Xperia 10 II dị ka smartphone dị n'etiti na ...
por Rafa Rodríguez Ballesteros eme Ọnwa 6 .
N'ihe na-erughi otu izu gara aga, anyị maara nke ọma ihe ga-abụ ụdị nke atọ nke njedebe dị elu nke Sony, ihe ...
Sony Xperia 10 II emelitere na gam akporo 11 dị ka atụmatụ
Ka ọnwa na-aga kemgbe Google wepụtara nsụgharị ikpeazụ nke gam akporo 11 maka ọkwa Pixel, ihe ...
Ngwaọrụ Xperia Compact ga-alaghachi na ahịa na 2021
Nnukwu ịnyịnya, na-eje ije ma ọ bụ na ọ bụghị. A na-ekwu okwu a na Spain (amaghị m ma ọ bụrụ na a na-eji ya na mba Latin America) ...
Sony Xperia 5 II na-amalite ịnata mmelite nke gam akporo 11
Mgbe ha nyesịrị mmelite nke gam akporo 11 na Sony Xperia 1 na Xperia 5, onye nrụpụta ndị Japan ugbu a ...
por Onyeka Onwenu eme Ọnwa 6 .
Sony ekwenyela na abụọ nke njedebe ya na-anata mbipụta nke gam akporo 11. Ọ bụ Sony ...
Sony na-ekwupụta ọkwa mbụ iji nweta gam akporo 11
por Onyeka Onwenu eme Ọnwa 8 .
Ihe gam akporo 11 gam akporo ga adighi adi onwa ato, agbanyeghi na adighi uwa niile, o gha eru otutu smartphones ...
Sony Xperia 5 II mara ọkwa na Snapdragon 865, 5G na ọkachamara ese foto
por Onyeka Onwenu eme Ọnwa 10 .
Sony na-ekwuputa otu n'ime ekwentị ọhụrụ ya ndị elere anya dị ka njedebe dị elu iji rute ya na Qualcomm processor dị ike, ọ bụ ...
Sony Xperia 5 II imewe enen
por Nerea Pereira eme Ọnwa 11 .
Enwere obere maka Sony Xperia 5 II iji hụ ọkụ. A na-atụ anya na ekwentị ọzọ nke ...
Vidio gosipụtara na-egosi nkọwa niile nke Sony Xperia 5 II
Nke nta nke nta onye nrụpụta Japan na-egosi anyị ihe ọhụụ ọhụụ na ngalaba telephony. A ole na ole gara aga…
Sony Xperia 1 II mara ọkwa na 12 GB nke Ram na mbipụta ole na ole
Ugbu a ịzụrụ Sony Xperia 1 II na Japan ga-anọrịrị n'otu n'ime ndị ọrụ abụọ kachasị mkpa ...
RUMOR: Sony nwere ike ịkwụsị ịme ekwentị
Budata naanị akwụkwọ ahụaja Xperia XZ2
Zute Sony Xperia XZ2 na XZ2 kọmpat
Sony Xperia ZX2 na ZX2 Compact Atụmatụ Leaked
Sony Xperia XZ2 Pro: Leaked Benchmark nke Sony izizi nwere ihuenyo 18: 9
Sony Xperia XA2, XA2 Ultra na Xperia L2 dị ugbu a maka ịkwado na BestBuy
Sony na-ekwupụta ekweisi ọhụrụ na CES na Las Vegas
Sony nwere ike igosi Xperia XZ1 Premium, XZ1 Plus na XZ1s n'oge MWC 2018
Ihe ndị a bụ nkọwapụta niile nke Xperia XA2, XA2 Ultra na L2
Nkọwa nke Sony XZ na-esote na-agbapụ
Sony Xperia R1 na R1 Plus: Nkọwapụta na ọnụahịa nke ekwentị Sony ọhụrụ
Sony Xperia XZ1 Compact, ihe ngosi izizi
Igwefoto Xperia X na-arịa ahụhụ nke na-achịkwa ikpo oke ọnụ
Nnukwu ihe dị iche na arụmọrụ na Xperia Z5 na gam akporo 5.1 Lollipop na gam akporo 6.0 Marshmallow
Nke a bụ otu Ọnọdụ Shot Shot nke Sony Xperia Z5 si arụ ọrụ
Ibudata ma wụnye ihe kachasị ọhụrụ nke Xperia Z3 Walkman ngwa na gam akporo ọ bụla
Sony Xperia Z3 na Xperia Z3 kọmpụta nsogbu igwefoto
Ngwọta maka nsogbu oriri batrị na ọkwa Xperia Z mgbe emelitere mmelite na KitKat